Esi gbaa CD na egwu ma ọ bụ vidiyo na kọmputa gị | Akụkọ akụrụngwa
Dị ka anyị tụlere na a ederede na Ntuziaka Teknụzụ ebe anyi gosiri ihe omume kacha mma iji gbanwee CD CD anyị na MP3, usoro ihe eji eme ihe na-anwụ obere obere. Ọ na-esiwanye ike ịchọta ngwaọrụ na nkwado maka diski, ihe a na-emekarị bụ ọdịnaya dijitalụ. Nke ukwuu, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala ọ bụla na-abịa na nkwado diski, ma laptọọpụ adịghịkwa.
Ahịa ahụ na-ezo aka na ntanetị ma ọ bụ na-achọ ọdịnaya, ebe ọrụ dịka Netflix, Spotify ma ọ bụ Amazon Prime kwụpụtara, nke nwere ma egwu egwu ma ọrụ vidiyo. Ma ọ bụrụ na anyị bụ otu n’ime ndị ka chọrọ iji ihe ndekọ nke anyị maka iji vidiyo anyị ma ọ bụ egwu anyị na diski, anyị nwere ọtụtụ mmemme kwesịrị ekwesị iji dee ha n'ụzọ dị mfe. Naanị anyị chọrọ kọmpụta nwere diski diski ma ọ bụ ịzụta nke mpụga.
1 Kedu ihe anyị nwere ike idekọ na maka gịnị?
2 Mmemme ọkụ discs na Windows
2.2 Mmanya 120%
2.4 DAEMON Ngwaọrụ Lite
3 Mmemme iji gbaa diski na macOS
3.1 Express ọkụ
Kedu ihe anyị nwere ike idekọ na maka gịnị?
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nka echefuru echefu, oge ndị ahụ mgbe anyị biri gburugburu diski oghere dị njikere iji ọkụ na kọmpụta anyị; nke mere na Na ụlọ ahịa ọ bụla, n'agbanyeghị obere, anyị hụrụ ndekọ ịzụta; ihe niile a abanyela na ndabere n'ihi nkwanye ma ọ bụ na-achọ ọrụ dị ka anyị kwurula.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ ịnwe nhọrọ ọzọ ịchekwa diski egwu kachasị amasị anyị ma ọ bụ ihe nkiri anyị chọrọ naanị iji nọgide na-anụ ụtọ mana ịchekwa ihe mbụ dị na igbe ya. O ọma mmemme ma ọ bụ ihe ngosi anyị chọrọ ịga n'ebe ndị anyị na-enweghị kọmputa ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ (ihe na-esiwanye ike). Anyị ga-akwado nhọrọ mmemme iji malite ndekọ ụdị faịlụ ọ bụla na CD, DVD ma ọ bụ BLU-RAY.
Mmemme ọkụ discs na Windows
Ọ bụ otu n'ime ihe omume ndị kasị ochie, na interface dị mkpirikpi ma dị ntakịrị oge na-adịghịzi, ma ọ bụ nghọta na mfe. Mmemme a na-enye anyị ohere idekọ ihe ọ bụla anyị nwere ike iche n’echiche, ihe ọ bụla format anyị chọrọ na kasị mma niile bụ na ọ bụ kpam kpam free.
Ọ dakọtara na ụdị Windows ọ bụla, site na Windows 95 ruo na Windows 10 kachasị ọhụrụ. Ọ ga - enyere anyị aka ịdekọ ihe ọ bụla gbasara anụ ahụ, ọbụlagodi ihe dị iche iche dịka usoro nke XBOX 360 (HD DVD) jiri.
Anyị nwere ohere nke ịkụnye diski ahụ ọkụ, nyochaa ya site na ngwanrọ iji jide n'aka na 100% na ọ nwere ike ịgụ ya na onye ọ bụla na-agụ ya. Anyị nwere ike gbanwee nha nke nchekwa ma ọ bụ encrypt diski anyị site na mbinye aka dijitalụ.
Na nke a Jikọọ anyị nwere ike ibudata usoro ihe omume.
Mmemme mepụtara n'ebumnuche nke ịbụ nhọrọ kachasị mma maka ịmepụta draịva ndị mebere ma ọ bụ ihe oyiyi cloning. Ọ dakọtara na ọtụtụ usoro gụnyere: mds, iso, bwt, b5t, b6t, ccd, isz…. Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-adị mma maka ịmepụta mbipụta ndabere nke ihe ọ bụla na-abata n'uche. Dịka ọmụmaatụ, anyị chọrọ otu CD iji wụnye Windows; site na mmemme a anyi ga eme ya n’ime nkeji oge.
Na mmanya na-aba n'anya 120%, niile disk cloning bụ ihe nke a ole na ole dị mfe nzọụkwụ, nke site na ya mfe interface Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ime n'agbanyeghị agbanyeghị ahụmahụ ya.
Na nke a Jikọọ anyị nwere ike ibudata ya.
Ihe omume ochie ochie ọzọ, yana interface ọ bụ ezie na ọ dị nkenke ma dị nkenke, a haziri nke ọma na ọ dị mfe nghọta. Asụsụ ọ bụla dị ya mere asụsụ ahụ agaghị abụ nsogbu nye onye ọrụ ọ bụla. Ihe omume a lekwasịrị anya na ndekọ nke ụdị ọ bụla, anyị nwere ike ịmepụta mkpokọta egwu na MP3, AAC, WAV, FLAC ma ọ bụ ALAC.
Agbanyeghị na ihe anyị nwere ike ime bụ naanị idetuo faịlụ dị ka a ga - asị na ọ bụ Pen drive. Enwere ike ime ihe a niile na CD na DVD. Dakọtara na nsụgharị Windows niile site na 2000, XP na Windows 10. Ọ nwere igwe egwu agbakọrọ ọnụ, mana enweghị mgbagha ọ gaghị abụ ihe anyị nyere ya, mana ọ dị ebe ahụ.
DAEMON Ngwaọrụ Lite
Ọ bụ mmemme kacha mma maka "Ndị okike" nke ọdịnaya. Isi ọrụ ya abụghị iji gbaa diski ọkụ maka ọdịyo ma ọ bụ vidiyo, kama lekwasịrị anya n’ichepụta onyogho ndị dị ka ISO. N'ime ndị niile anyị biputere ugbu a, o doro anya na ọ bụ nke nwere ọhụụ ọhụụ ugbu a, m ga-ekwukwa banyere ndepụta ahụ niile, mana ọ kensinammuo ma dị mfe.
Ka anyi kwuo na mmemme a bu nke kachasị adaba maka ịdekọ, dịka ọmụmaatụ, egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ihe nkiri, ma DVD ma BLU-RAY. Ọ na-enye anyị ohere ịme ya n'ọtụtụ nkebi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. The free version nwere mgbasa ozi, ma, ọ bụ ụgwọ anyị ga-akwụ ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịkwụ ego n'akpa anyị. Ọ bụ ezie na anyị nwere nhọrọ ịzụta nke akparaghị ókè ndụ ikike maka naanị € 4,99, nke ga-enye anyị ohere ịwụnye ya na kọmputa 3.
Anyị nwere ike ibudata mmemme na nke a Jikọọ.
Ee, anyị nwere ike ọkụ a music diski na-enweghị iji wụnye ihe ọ bụla na kọmputa anyị ma ọ bụrụ na ọ nwere Windows arụnyere. Site na Windows XP ruo 10, nke a bu ihe bara uru nke biara na Windows Media Player.
O doro anya Ọ bụ nhọrọ maka naanị ndị chọrọ ịdekọ egwu egwu CD. Ebe ọ bụ na nke a dị oke oke ma ọ naghị enye gị nhọrọ maka ndekọ, ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ zuru oke na ogo oyiri dị ezigbo mma. Kachasị mma, anyị agaghị eme nrụnye ma ọ bụ nbudata ọzọ.
Mmemme iji gbaa diski na macOS
Ndị anyị na-eji ngwaahịa apụl nwekwara ikike ịsu anyị diski anyị, yabụ anyị ga-enyekwa ụzọ ndị ọzọ iji mee ha na sistemụ macOS. The dịgasị iche iche bụ obere mbara ma anyị nwere ike ịnụ ụtọ nhọrọ ndị dị nnọọ ka ndị anyị nwere na Windows.
Anyị na-amalite na ihe bụ maka m nhọrọ kacha mma; Aha ya, dị ka ọ na-egosi, na-ezo aka na ọsọ ya, yabụ anyị na-eche ihu na mmemme nke na-enye anyị ohere ịdekọ diski na ọsọ dị elu karịa nkezi, ọ bụ ezie anyị nwere nhọrọ nke ịdekọ ha na obere ọsọ iji kwe nkwa mma kacha mma enwere ike.
Anyị na-eche ihu otu n'ime ngwa kachasị zuru ezu nke ndepụta ahụ dum. Anyị nwere ike ịdekọ vidiyo na AVI ma ọ bụ MPG. Mepụta ma jikwaa ọba akwụkwọ DVD ma gbanwee ndebiri maka menus igodo. Anyị nwere ike itinye akara mmiri na ndekọ anyị, anyị nwedịrị ike ịdekọ vidiyo vidiyo na PAL ma ọ bụ NTSC, yana ịgbanwe akụkụ nke panorama.
Ọ bụ mmemme dị mfe dịka aha ya siri dị. Ọkụ ma CD ma DVD. Agbaba ọ bụla version nke sistemụ si MacOS X dị na Katalina. Ọ na-ahapụ anyị ka anyị gbaa akwụkwọ Archive, music discs, mepụta obere mmekọrịta, mụbaa diski na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụ usoro ihe omume dị mfe iji jiri interface dịka enyi na enyi. The naanị downside na anyị na-ahụ na a software bụ na mgbe na-ere ọkụ a DVD ọ dị mkpa na video format ịbụ .mpg. Ọ bụghị a nnukwu nsogbu na-ewere na ihe omume na-akpaghị aka na-agbanwe faịlụ ka .mpg; Ọ bụ ezie na maka nke a anyị ga-echere oge ka a na-eme ntughari tupu ịdekọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi gbaa CD na egwu ma ọ bụ vidiyo na kọmputa gị
AUKEY EP T25 Nyocha isi okwu